Semalt Inonyevera 8 Dangerous Black Hat SEO Techniques
Nzira dze SEO dzinofanira kutevedzera pane zvakatemwa ne injini dzekutsvaga . Kunyange zvakadaro, kune avo vanhu (spammers) vanoda kucheka makona kuti vauye nehuwandu hwemigwagwa panzvimbo dzavo. Vanodaro nokuputsa mitemo yakatarwa nemichina yekutsvaga nemitambo inowanzozivikanwa seheti yakasviba - best quality vps.
Michael Brown, nyanzvi yepamusoro kubva Semalt , anotsanangura mashoma acho kuti iwe ugare wakachengeteka:
Vashandi vanoenda kunotenga zvigaro zvichienderana nemashoko akafanana neaya anowirirana sei, uye mutengesi unogamuchira, kuti uwane nzvimbo dzakakwirira. Zviri nyore kuita semunhu haafaniri kutarisana nehutano hwehutano hwehupenyu mushure mokunge vaine nekutengesa. Uyezve, sezvo injini dzekutsvaga seGoogle dzichivimba zvikuru nemagwaro ekugadzirisa kuti zvive nzvimbo, vatengi vanogona kusarudza kutenga imwe kubva pane zvavanoda.
Chinangwa chavo chinangwa ndechekugadzira backlink yakasununguka kune site ye spammer uye hazvipi kupa SEO mazano. Vhura mablogi kunze kwekutarisa kwemashizha zviri nyore zvinowanikwa pamhinduro dzepamu. Inosiya pfungwa isina kunaka nevaya vanoshanyira nzvimbo yacho, iyo inoderedza zvavanowana. Ivo vanobva vasisakwanisi kusiya mhinduro chero ipi zvayo inokosha sezvo bhurocha rinoratidzika se risina basa kana kuti rinoregererwa.
Icho chiitiko che "copy and paste" chinoshandiswa kuparadzira zvinyorwa zvakatarisa kune dzimwe nzvimbo. Tsvaga injini dzinosarudza zvinyorwa zvakasiyana-siyana uye kudzokorora kunoshungurudza mukana wesaiti wekunyoresa. Vashandi havatarisiri kuwana zvinyorwa zvakafanana pane dzimwe nhanho pane imwe nhamba yeGoogle..Icho chinoderedza chiitiko chavo ndicho chikonzero nei chichigadzira sehombodo tsvuku. Kudzokorora kunogonawo kuitika pane imwe nzvimbo. Kazhinji, kazhinji kacho nekuda kwekushaiwa zivo. Mashoko eAkoniki anobatsira kuona chinyorwa chepakutanga chepasita, zvichiita kuti mamwe makopi asaoneke neGoogle crawl bot.
4. Chisungo Spinning
Icho chimiro chekudzokorora apo vatengesi vanoita shanduko kune imwe nyanzvi inoita kuti iite seyiyo itsva kana yakasiyana neyekushandisa zvigadzirwa zvekuteerera. Ndikuwana mukurumbira, pasinei nokuti yakakodzera mamiriro ekunyatsotariswa.
Kuchengeta inzira inoshandiswa kuendesa zvakagadzirwa kana URLs kumushandisi zvakasiyana zvachose kubva kune izvo zvinotsvaga zvinotsvakurudza injini. Inoshandisa injini yekutsvaga kuti iite yakakwirira pamusoro peSERP ichiri kuendesa mashoko asina ruzivo kune muenzi.
6. Doorway Mapeji
Aya ndiwo mazwi makuru-akakwaniswa mapeji ekutambisa anoshandura vashandisi kubva pane imwe sarudzo yakasarudzwa kune imwe nzvimbo kuenda kune imwe nzvimbo. Vanonyanya kufunga nezvekunyoresa pamusoro pemibvunzo chaiyo.
Pano, vashandisi vebhuku rekudhipiti vachaisa zvinyorwa zvavo nehuwandu hwemashoko makuru ekunyora kuti vawedzere mikana yavo pakuonekwa paSERP, zvichidaro nekufambisa senzira dzakawanda dzehupenyu sezvazvinogona. Zvisinei, kuisa zvinhu zvinyorwa zvinyorwa kuita zvigadzirwa zvisingatarisi uye zvisina kushandiswa nevashandi.
Nzira yacho inosanganisira kuisa sarudzo dzemashoko ekuchena, zvichiita kuti isingaoneki kune mushanyi. Ndiyo chete injini dzinotsvaga dzinosvika pakuwana, dzinyorera uye dzinozvifungidzira.
Vanhu vanoshandisa kushandisa mashizha emagetsi matsvuku havaregereri njodzi huru inobatanidzwa navo sezvo vachiwanikwa chero zvakadaro. Zvinoguma muzvikwereti, kana mumamiriro ezvinhu akaipisisa, mitsva yekutsvaga inorambidza nzvimbo yacho kubva panguva dzose ichioneka paSERP.